एशियामा सब भन्दा धेरै भ्रमण गरिएको देशहरू, के तपाईं ती सबैलाई चिन्नुहुन्छ? | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | पर्यटन गन्तव्यहरू, एशिया यात्रा
एउटा समय थियो जब युरोप एकदमै फेसनशील थियो, पर्यटनको हिसाबले, किनभने शीत युद्धले यसलाई विभाजित गरेको थियो र विरोधाभासहरू प्रभावशाली थिए। आज मलाई लाग्छ एशियाले युरोपलाई हराउँछ यदि हामी टाढा र विदेशी गन्तव्यहरू र धेरै फरक संस्कृतिहरूको सोच्दछौं भने।
फरक, यात्रुहरू, हामी मनपराउँछौं। किन उस्तै स्वादहरू प्रयोग गर्नुहोला, उही अनुहारहरू हेर्नुहोस्, हामीलाई पहिले नै थाहा भइरहेको भाषाहरू सुन्नुहोस्? एशिया यति फरक छ र त्यसैले यो यति आकर्षक छ। तर त्यहाँ अरूहरू भन्दा बढी लोकप्रिय देशहरू छन् जब यो पर्यटनको कुरा आउँदछ र यहाँ छ हालका वर्षहरूमा सब भन्दा भ्रमण गरिएको एशियाई देशहरू:
कुनै शंका बिना अब चीन यो एशियाली पर्यटन को एक विशाल छ। यो आर्थिक दृष्टिमा संसारको लागि खुलेको छ र यसको गहन रूपान्तरणले हामीलाई आकर्षित गर्दछ र यसको केही पर्यटन गन्तव्यहरु लाई बढी मैत्री बनाउँछ यात्रुहरुलाई चिनियाँको एक शब्द पनि नजान्ने।
यो अनुमान गरिएको छ कि हरेक वर्ष चीन लगभग million 58 मिलियन विदेशी आगन्तुकहरु प्राप्त गर्दछ, ह Hongक Kong र मकाओ शहरहरू गणना नगरी जुन प्रति वर्ष करिब million० मिलियन प्राप्त गर्दछ। के कुरा निश्चय छन् कि मुख्य भूमि चीन र कम ज्ञात गन्तव्यहरूको लागि यात्रीहरूको संख्या बढ्दो छ।
अगाडिको ढोका सामान्यतया हुन्छ बेइजिङ शताब्दियौंदेखि यो देशको राजनैतिक केन्द्र हो। को निषेध नगर, ला टियानानमेन वर्ग, the माओ मसोलियम, हटसंग्स वा पुरानो छिमेक जुन पुरानो बेइजि,, यसको संग्रहालयहरू र अन्य दरबारहरू र मन्दिरहरू संरक्षण गर्दछ। र ठूला व्यक्तिहरूको उल्लेख गर्नु हुँदैन बजारहरू जहाँ किनमेल महान र अविश्वसनीय मूल्यहरूमा छ।
शंघाई आधुनिक शहर हो, जीवन्त। सधैं भएको छ। नानजिing रोड यो हिंड्न र किनमेल गर्न सडक हो, तर विदेशी छिमेक ती आँखा र तालुमा रमाउँदछन्। एक पटक फ्रेन्च र अ English्ग्रेजी यहाँ बस्छन् र तिनीहरूको घर र सांस्कृतिक ट्रेस रहन्छ। रातको जीवन पनि महान छयद्यपि यो सस्तो शहर होइन।
हङकङ यो विश्वव्यापी शहरको अर्को उदाहरण हो। को जंगल स्किस्केरापर, एस्केलेटरहरू जताततै, बार र फ्यान्सी रेस्टुरेन्टहरू, बजारहरू घण्टा ह्याग्लि waste र बर्बाद गर्न डु boat्गा सवारी हरेक रात भवनहरूको बत्तीहरूको प्रशंसा गर्न।
त्यहाँ नजिकैका टापुका भ्रमणहरू छन् उनीहरूको मन्दिरहरू र रमणीय गाउँहरू र एक घण्टाको साथ पूर्वको लस भेगास, मकाउ, पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश।
तर चीन पनि छ टेराकोटा वारियर्स जियानमा, मन्दिरहरू र आकाशीय परिदृश्यहरू तिब्बत, को परिदृश्य Guilin र ली नदीमा र यसका साथ यांग्त्जे तीन गोर्जेस बाँधउदाहरण को लागी। एउटामा हजार गन्तव्यहरू, त्यो चीन हो र यसले यसको नम्बर एक स्थानलाई सम्मान गर्दछ।
प्राप्त गर्नुहोस् एक वर्ष लगभग २ million करोड आगन्तुकहरु र अधिक द्वारा देश प्रविष्ट गर्नुहोस् कुवलालम्पुर, पेट्रोनास शहर, जुम्ल्याहा टावरहरू। आधुनिक शहर भन्दा पर, किनमेल केन्द्रहरू, बारहरू, क्याफेहरू र लक्जरी रेस्टुरेन्टहरूको साथ, यसले हामीलाई धेरै प्रदान गर्दछ।
मलेसियाका टापुहरूमा हामी सक्दछौं लुउनिंग, डाइभि,, स्नोरक्लि।, क्रूजिंग, माछा मार्ने, र सूर्यका ताराहरू प्याराडाइसियल स्थानहरूमा। र मलाय प्रायद्वीप, ल्या Lang्कवी वा टियोमानको समुद्री तटहरू, उल्लेख गर्नु पर्दैन।
ब्याकप्याकरका लागि थाइल्याण्ड महान छ किनकि हावा महँगो हुन सक्छ बाँच्नको लागत धेरै सस्तो छ। टापुहरू र उष्णकटिबंधीय तटहरू तिनीहरू महान छन्, यस्तो देखिन्छ कि यहाँ गर्मी कहिल्यै समाप्त हुँदैन, तर राजधानी, बैंकक, अर्को अद्भुत गन्तव्य हो।
वास्तवमा, बैंकक विश्व मा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहर हो र प्रत्येक वर्ष करिब १ million करोड आगन्तुकहरूले यसलाई कुल्चीमिल्छन्। यो कस्तो भइरहेको छ? सौन्दर्य र कम मूल्य पर्यटक सफलता को पर्यायवाची छ।
यदि तपाईं नक्शा देख्नुहुन्छ भने तपाईंले सिंगापुर मलेसिया र इन्डोनेसियाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भनेर महसुस गर्नुहुन्छ त्यसैले फाइदा लिनुहोस् र आगन्तुकहरूलाई जित्नुहोस्। यो हिसाब छ कि प्रति वर्ष केवल १० करोड भन्दा बढी मानिसहरूले यसलाई भ्रमण गर्छन्।
धेरै आफ्नो जान्छन् क्यासिनोत्यहाँ दुई विशाल क्यासिनोहरू छन् जुन विश्वभरि प्रसिद्ध छन्: रिसोर्ट्स वर्ल्ड सेन्टोसा, होटलको साथ, र मारिना बे Sands। आधुनिक र लगभग विज्ञान कल्पना खाडी द्वारा बगैचा तिनीहरू अर्को निर्विवाद पर्यटन चुम्बक हुन्।
डिभिजनले चिह्न लगाएको यो सानो देश, जुन अझै पनी जारी छ, को सफलताको पछि पर्यटनको आँखामा राखिएको छ कोरियाली सिनेमा र टेलिभिजन निर्माण। The के-नाटकहरू तिनीहरू पहिले एशियामा धेरै लोकप्रिय भएका छन् र अब युरोप र अमेरिकामा खपत हुन्छन्।
यसैले, सियोल, राजधानी, जुन यी सबै अडियोभिजुअल निर्माणहरूका लागि सबैभन्दा विशिष्ट सेटिंग हो, सबैभन्दा भ्रमण गरिएको कोरियाली गन्तव्य हो। यो एक आधुनिक र सुन्दर सहर हो जुन यस बर्षमा लगभग १० करोड मानिसहरुमा देशको भ्रमण गर्ने संख्यामा वृद्धि गर्न सफल भएको छ।
अवश्य पनि, दक्षिण कोरिया एक धेरै सुन्दर देश हो तर यो अझै पनि धेरै ग्रामीण छ त्यसैले सियोल र सबैभन्दा टाढाको शहर बाहेक बुसान त्यहाँ देखिने कुनै ठूला सहर केन्द्रहरू छैनन्। को जेजु टापु सियोल सामना गर्नु सिफारिस गरिएको छ र यदि तपाइँ प्रकृति मन पराउनुहुन्छ, ताल दृश्य, बे र कोरियाली तटहरू राम्रो गन्तव्य हो।
इन्डोनेसिया टापुहरूको समूह हो, बसोबास र बसोबास, हजारौं मा संख्या। यो एक वर्ष साढे7लाख आगन्तुकहरु प्राप्त गर्दछ र ती मध्ये धेरै तिर त हिंड्न बाली, सेतो बालुवा समुद्र तट, लक्जरी रिसोर्ट, सस्ता आवास र हिन्दू मन्दिरहरूको साथ एक सुन्दर टापु।
तिनीहरू उहाँको पछि लाग्छन् जकार्ता र यसको राजधानी लय, Borneo यसको जsts्गल र जीवजन्तु र गिल्ली टापु डाइभिंग र स्नोरक्लिंग गन्तव्यको रूपमा। ती मनपर्नेहरू हुन्।
थोक संस्कृति र इतिहास, त्यो भारत हो। भारतमा तीनवटा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहरहरू मुम्बई, दिल्ली र कोलकाता हुन् (कलकत्ता, बम्बई र दिल्ली)। कोही पनि मिस गर्न चाहँदैनन् ताज महल, Angra मा, को धार्मिकता वाराणसी, गंगा र गोस वा केरला तटहरू.
यो मलाई यात्रीहरूको लागि उत्तम गन्तव्य जस्तो देखिदैन, मेरा साथीहरूले नराम्रो अनुभव गरेका छन्, तर धेरैका लागि यो उनीहरूको जीवनको यात्रा हो।
यो एशियामा मेरो मनपर्ने गन्तव्य हो तर यो पर्यटन को मात्रा को दृष्टिकोण बाट सबैभन्दा लोकप्रिय छैन। टोकियो एक शानदार शहर हो र देशको हिमाली प्रकृति अविस्मरणीय परिदृश्य लुकाउँछ।
पुरातन मन्दिरहरू, मध्यकालीन किल्लाहरू, समुराई कथाहरू, राम्रो स्थानीय बियर, गीशास, माउन्ट फुजी र यसको राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, तातो स्प्रिहरू, यसको जनताको उदारता, यसको प्राविधिक स्तर, मेरो लागि सबै थोक महान छ।
सायद मनपर्ने गन्तव्य होइन यो टाढा छ, तपाईं केवल हवाईजहाजबाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ र तपाईंसँग कुनै विकल्प छैन देशमा फोकस गर्न को लागी उही यात्रामा थोरै टच अन्य गन्तव्यहरूको रूपमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » एशिया यात्रा » एशियामा सब भन्दा धेरै भ्रमण गरिएको
तीन अनुभवहरू तपाई सिडनीमा गुमाउन सक्नुहुन्न